WAR CUSUB: Dilkii Gaanshaanle Ciise Jiijile iyo ilaaladiisa oo la shaaciyey inuu ahaa… | Garqaad News Agency
WAR CUSUB: Dilkii Gaanshaanle Ciise Jiijile iyo ilaaladiisa oo la shaaciyey inuu ahaa…
Jul 27, 2017 - Comments off
Waxaa maanta ciidamo katirsan ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya ku dileen afaafka hore ee tiyaatarka Qaranka Sargaal sare oo katirsanaa ciidanka nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo qaar kamid ah ilaalo la socotay.
Masuuliyiin katirsan dowlada Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilka loo geestay Gaashaanle Ciise Xasan Caraale (Jiijile) oo ahaa taliye kuxigeenkii hore ee Ciidanka Nabad sugida uu ahaa mid ku dhacay qaab shil ah ayna socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sida uu u dhacay falkaasi.
Suldaan Xasan Madoobe oo ah suldaanka beesha uu kasoo jeedo Sargaalka la dilay oo la hadlay Warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in dilka loo geestay Ciise Jiijiile iyo ilaaladiisa uu ahaa mid qorsheesan oo u dhacay qaab ku tala gal ah.
Waxa uu sheegay Suldaanka in ciidamada ilaalada Madaxtooyada ay ku tala gal u dileen Ciise Jiijiile iyo ilaaladii la socotay xili ay doonayeen in ay kasoo gudbaan koontaroolka Tiyaatarka, waxa uuna tilmaamay in dilkaasi uu amray sargaal ciidankaasi heestay.
”Waxaan kuu sheegayaa dilka sargaalka iyo ilaaladiisa ma aheyn mid ku dhacay qaab shil ah ee waxa uu ku dhacay si kutalagal ah, cadeymo ayaan heynaa dilkaasi waxaa amray gaashaanle ciidankaasi heesta, sargaalka markii la dilayay waxa uu kasoo degtay gaariga uu la socday dhoor xabadood ayaa lagu dhuftay , gaarigii ay la socdeen sargaalka iyo ciidankiisa xitaa waa la banjariyay ”Ayuu yiri Suldana Xasan Madoobe.
Suldaanka ayaa ku baaqay in baaritaan deg deg ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilkaasi loo geestay sargaalka katirasanaa ciidanka NISA iyo ilaaladiisa , waxa uuna ka codsaday dowlada in lasoo qabto cadaaladana la horkeemo askartii dilkaasi ka dambeysay.
Hadalka Suldaanka ayaa imaanaya xili maanta Ciidamada ilaalada Madaxtooyada ay dileen Taliye kuxigeenkii hore ee Ciidanka Nabad sugida gobolka Banaadir Ciise Jiijiile iyo labo kamid ah ilaaladiisa, dowlada Soomaaliya oo falkan cambaareesay ayaa sheegtay in loo saaray guddi baaritaan ku sameeya.